Olee otú Iji nwalee Speed ​​maka iPad
Dịghị onye chọrọ iji kwụọ ụgwọ maka internet ọsọ na ọ na-agaghị na-echefu. Ya mere, internet ọsọ ule ngwa ndidi ewu nnọọ ewu ruo oge ụfọdụ ugbu a. Echiche nke internet ọsọ ule dokwara ama n'etiti android na iOS ọrụ. Ya mere ndammana, a otutu ngwa maka nzube dị ma na Google Play na iTunes.
Iji nwalee internet ọsọ ule na ihe iPad, ị ga-achọ a ọsọ ule usoro. Speedtest.net Mobile Speed ​​Ule site Ookla bụ ihe ngwa dị na iTunes for free download. Ọ bụ a mfe iji internet ọsọ ule nke bụ ewu ewu n'etiti ọtụtụ n'ime iPad ọrụ. Speedtest.net bụ dakọtara na iPads nakwa dị ka iPhones. Ọ nwere ike ibudata site https://itunes.apple.com/en/app/speedtest.net-mobile-speed/id300704847?mt=8.
Iji malite anwale internet ọsọ na gị iPad, eso ndị a:
Download na wụnye speedtest.net si iTunes gị iPad. Chere maka ngwa rụchaa nwụnye.
Ozugbo echichi zuru ezu, ẹkedori speedtest.net ngwa gị iPad site na ịme ọpịpị na ya akara ngosi. A na ihuenyo ga-apụta na a button sị "na-amalite Ule". Enweta na bọtịnụ.
-Na na na-ekiri ka speedtest.net okụt a kwesịrị ekwesị na ihe nkesa na ule bulite na ibudata ọsọ maka gị njikọ Ịntanetị otu otu.
Ga-arụpụta ga-egosi a window yiri onye gosiri n'okpuru mgbe internet ọsọ ule e dechara. Ị nwere ike ịhọrọ "Malitegharịa ekwentị ahụ na Ule" ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ nnọọ n'aka banyere ọsọ nke gị njikọ Ịntanetị ma obi ike na speedtest.net site Ookla bụ a tụkwasịrị obi na-eji ngwa na nnọọ ala njehie puru.
Olee otú nwalee gị iPad arụmọrụ
Benchmarking ihe iPad bụ adịghị mfe ka Benchmarking ihe gam akporo ngwaọrụ esighịkwa ọtụtụ dị iche iche ihe. N'ihi na otu onye, ​​ọnụ ọgụgụ nke ngwa maka nzube bụ budata obere karịa ndị dị maka android ngwaọrụ. Otu pụrụ ịdabere na ngwa, Otú ọ dị bụ "PerformanceTest Mobile" site Site PassMark Software Inc. Ọ na-ahapụ gị nyochaa gị iOS ngwaọrụ dabeere na a ọnụ ọgụgụ nke arụmọrụ e ji mara. Ị nwere ike mgbe n'okpuru a pụta na tụnyere arụmọrụ nke gị iPad ndị ọzọ iOS ngwaọrụ.
Download PerformanceTest Mobile ngwa si ​​https://itunes.apple.com/us/app/performancetest-mobile/id494438360?mt=8 na wụnye ya na gị na iPad.
Na-agba ọsọ ya otu ugboro echichi e dechara. Ị ga-ahụ a na ihuenyo yiri onye e gosiri n'okpuru.
Kpatụ "Run benchmark" nhọrọ ka ngwa-amalite na-agba ọsọ ule na gị iPad na-ekpe ikpe ya ịrụ ọrụ megide e ji mara dị ka CPU arụmọrụ, 2D ndịna-emeputa na 3D ndịna-emeputa wdg
Ozugbo Benchmarking usoro-agwụ agwụ, na-eji ngwa ga-egosipụta arụmọrụ results gị iPad. Ị nwere ike mgbe n'okpuru a pụta iji arụmọrụ nke gị iPad na ndị ọzọ iOS ngwaọrụ.
Iji nweta ezi results si Benchmarking usoro ọ dị mkpa iji hụ na ọ dịghị ndabere ngwa ọdịnala na-agba mgbe Benchmarking bụ ka underway. Nke a bụ n'ihi ihe ọ bụla na-agba ọsọ ndabere ngwa nwere ike tinye n'ọrụ CPU ego gwụ ya ịrụ ruo ya ezi nwere na benchmark.
Atụmatụ na usoro maka iPad ọsọ ule
Mgbe iPad ọsọ ule bụ mara n'ụzọ kwụ ọtọ ule, ụfọdụ aghụghọ na-abịa kemfe mgbe n'ịrụ onye na-enye gị ihe echiche nke ahụ n'ezie internet ọsọ na ị na-na iPad.
Mechie niile na-agba ọsọ ngwa.
Nso ndabere ngwa nwere ike na-n'ịmị internet ọsọ.
Ọ bụrụ na ndị internet ọsọ na ị na-na-bụ budata erughị ihe ị na-akwụ maka, akpa ego ndị na-agba site na njikọ a laptọọpụ gị modem ji otu ihe Ethernet USB. Ọ bụrụ na nsogbu nkwenkwe, kpọtụrụ gị ISP. Ọ bụrụ na Otú ọ dị, nke nta gbapụrụ ọsọ na-ejedebeghị na iPad naanị, Malitegharịa ekwentị gị iPad si Wi-Fi.
Ụfọdụ ngwa na pụrụ inyere gị mgbe ịlele maka iPad internet ọsọ bụ:
Speed ​​Ule SpeedSmart WiFi & Mobile Network Ngwá Ọrụ - Performance Speedtest
Speed ​​Ule SpeedSmart WiFi & Mobile Network bụ kpam kpam free ngwá ọrụ na-eme n'ezie na oge analysis nke njikọ Ịntanetị si ọsọ site anwale download ọsọ, bulite ọsọ na ping. Ule nwere ike dechara na oge dị ka na-erughị ka sekọnd 30. A na ngwa ike ga-eji nwalee gbapụrụ ọsọ maka cellular njikọ nakwa na nsonaazụ nwere ike jiri ya tụnyere ihe ISP si nkezi ọsọ na latency.
Na a sleek interface na ọhụrụ Blu opi dị ka netwọk, na Speedtest bụ kemfe ngwá ọrụ iji nwalee iPad ọsọ. Ọ nwere ike na-agba ọsọ email ule ke mgbakwunye na-egosi kacha bulite na download gbapụrụ ọsọ. Ọ na-nwere ike ịchekwa ule results maka analysis n'ọdịnihu. The pụta ga-discarded ma ọ bụ tọgharịa dị ka kwa onye ọrụ chọrọ.
Cisco Global Internet Speed ​​Ule (isi)
Cisco isi bụ gị ahụkarị ọsọ ule na jikoro internet gbapụrụ ọsọ maka Wi-Fi nakwa dị ka cellular netwọk. The gbakwunyere-ekwu bụ na ọ na-ahapụ ndị ọrụ maara ihe ndị ha iOS ngwaọrụ bụ ike nke na site na ime ka ha tụnyere ha stats na ndị ọzọ iOS ọrụ gburugburu ụwa.
Olee otú Iji Jiri Vine N'ihi iPad
> Resource> iPad> Olee Iji nwalee Speed ​​maka iPad